အလွမ်းမိုး‌လေး တိတ်‌‌စေချင်‌ — Steemit
အလွမ်းမိုး‌လေး တိတ်‌‌စေချင်‌
လွမ်း‌ဆွေးဖွယ်‌‌ကောင်း‌သော အချစ်‌ဇာတ်‌လမ်း‌လေး‌တွေ ဖတ်‌ရ ကြားရ မြင်‌ရရင်‌ ‌သူ့ရဲ့ရသက တစ်‌မျိုးဘဲ‌နော်‌။ အလွမ်းရသ ကူးစက်‌‌စေသလိုဘဲ။ ဥပမာ ဗျာ တစ်‌ဝဂူ အ‌ကြောင်း ဖတ်‌ရရင်‌ နား‌ထောင်‌ရရင်‌ ရင်‌ထဲမှာ သနားပြီး တနုန့်‌နုန့်‌ခံစား‌နေရတယ်‌။ ‌နွေဦးရဲ့ ‌တ‌ပေါင်းလည‌နေ‌‌စောင်း ‌တွေဆို ဘာကို လွမ်းမှန်းမသိ စိတ်‌ကို‌မောဟိုက်‌‌စေတယ်‌။ ‌‌နောက်‌ပြီး ‌နေဝင်‌ချိန်‌ကို တကူးတက ‌စောင့်‌ကြည့်‌‌တဲ့သူ‌တွေကို အံ့သြမိတယ်‌။ သဘာဝ‌ဆေး‌ရောင်‌စုံ တိမ်‌ပန်းချီကြားထဲမှာ နှုတ်‌ဆက်‌ထွက်‌ခွာ‌နေတာကို ထိထိမိမိ စိုက်‌ကြည့်‌နိုင်‌တဲ့အစွမ်း မရှိတာ‌တော့အမှန်‌။ အဲ့ဒါ‌ကြောင့်‌ ‌နေဝင်‌ချိန်‌ဆို ကျွန်‌‌တော်‌မကြည့်‌ဘူး။
‌ဆွေးမြည့်‌ရမယ့်‌ အချစ်‌ဇာတ်‌လမ်း‌တွေကို ဖတ်‌ချင်‌‌ပေမယ့်‌ လွမ်း‌ဆွေး‌သောလှိုင်း‌တွေကူးစက်‌‌စေလို့ ‌နောက်‌ဆို ‌ရှောင်‌ကျဉ်‌‌တော့တယ်‌။‌ယောင်္ကျားဖြစ်‌ပြီး အသည်းနုတယ်‌လို့ဘဲဆိုဆို ခံစားစရာရှိရင်‌‌တော့ အပြည့်‌အဝ ခံစားပစ်‌လိုက်‌တာဗျ။ ပန်‌ထွာဘုရင်‌မတို့၊ဒိုင်းခင်‌ခင်‌နှင့်‌ ‌မောင်‌‌ဖေငယ်‌ဇာတ်‌လမ်းတို့ ဆိုရင်‌ လွမ်း‌မောဖွယ်‌ သနားဖွယ်‌ရသ‌ပေးတဲ့ ဇာတ်‌လမ်း‌လေး‌တွေပါ။ ‌ရေးသားတဲ့သူ‌တွေကလည်း ‌တော်‌ရှာပါတယ်‌။ ဖြစ်‌ရပ်‌မှန်‌ အ‌ကြောင်းအရာ‌လေး‌တွေကို ‌ကျော‌ထောက်‌‌နောက်‌ခံထားပြီး သံဇဉ်‌‌လေး‌တွေထည့်‌လိုက်‌‌တော့ ပိုပြည့်‌စုံသွားတာ‌ပေါ့။
ဝတ္ထု‌ရေးနည်း သင်‌ကြားပြီး ‌ရေးဘို့‌တော့ စိတ်‌ကူးရှိတယ်‌။ အနုပညာဆိုတာ ဖန်‌တီးမှုကို ဦးတည်‌‌ပြောတာပါ။ စာ‌ရေးသားခြင်းမှာ အနုပညာ ပိုဖြစ်‌‌စေတာက ရသစာ‌ပေပါ။ ကိုယ်‌ဖန်‌တီးတာ‌လေး‌တော့ ချပြချင်‌တယ်‌။ ဒါ‌ကြောင့်‌ရသစာ‌ပေဘက်‌ကို တဖြည်းဖြည်း‌ပြောင်းကြည့်‌မယ်‌လို့ ‌တွေးမိတာပါ။ ကိုယ့်‌အသက်‌အရွယ်‌နဲ့ အချစ်‌အနုအရွ ‌လေး‌တွေ ‌ရေးမယ်‌ဆို‌တော့ တစ်‌မျိုးကြီးဗျ။ ကိုယ်‌ကလည်း‌ ‌ခုမှစ ‌ရေးတာဆို‌တော့ မကျွမ်းကျင်‌ဘူး‌လေ။ ကိုယ့်‌ခံစားချက်‌‌ရေးသလို ထင်‌ကြမှာလည်း စိုးရိမ်‌တယ်‌။ဦးယုဇန post ကိုဖတ်‌လိုက်‌ရ‌တော့ ‌တော်‌‌တော်‌အားရှိသွားတယ်‌။ အနုပညာ ဖန်‌တီးတာဘဲ ကြီးတယ်‌ ငယ်‌တယ်‌ မရှိပါဘူး။ စာဖတ်‌ပရိတ်‌သတ်‌ကို ရသတစ်‌ခုခု ‌ပေးနိုင်‌ဘို့ အဓိကပါ။ တစ်‌ခု‌တော့ ကြို‌ပြောထားမယ်‌‌နော်‌။ မ‌ဟော်‌က လွမ်း‌အောင်‌လည်း ချွဲတတ်‌တယ်‌ ၊ယုံ‌အောင်‌လည်း ‌ပျော်‌တတ်‌တယ်‌‌၊ ပြီးမှယုံအပ်‌လို့ ပုံအပ်‌မိတယ်‌‌တော့ မဖြစ်‌‌စေနဲ့ ။တားမှာ ခ‌လေးနှစ်‌‌ယောက်‌နဲ့ မိန်းမရှိတယ်‌။ဟား ဟား ခုလို‌ရေးကြည့်‌တာကို တစ်‌မျိုးကြီး။မ‌ရေးတာဘဲ ‌ကောင်းမလားမသိ။ တစ်‌ဖြည်းဖြည်းစမ်း‌လျှောက်‌ကြည့်‌ရမှာဘဲ။
" အလွမ်းမ်ိုး‌လေး တိတ်‌‌စေချင်‌"
ချစ်‌နှမ ‌နှောင်းငယ်‌‌ရေ.....။
တစ်‌ပုဒ်‌‌တော့ လွှတ်‌လိုက်‌ပြီဗျို့။မကြိုက်‌ရင်‌ ကျွန်‌‌တော်‌‌ရေးတာဟုတ်‌ဖူး၊ ကြိုက်‌ရင်‌ မ‌ဟော်‌ ‌ရေးတာ။ ‌နောက်‌ဆုံ‌တွေ့ကြစို့ ချစ်‌လှစွာ‌သော စာဖတ်‌ပရိတ်‌သတ်‌တို့‌ရေ။
ကြိုက်​ပါတယ်​ ကိုမ​ဟော်​ရာ ☺ ☺
‌အခြားနည်း‌တွေ ‌ရေကြည်‌‌နေတာ။‌ကျေးဇူးပါဘဲ အန်‌တီ။
အလွမ်းမိုးတွေ သည်းတုန်းပေါ့ စာနာနိုင်သူမရှိ ... ♫
မိုးနဲ့ အလွမ်း က ဆက်‌စပ်‌မှု ရှိ‌တော့ ကဗျာ စပ်‌ကြည့်‌လိုက်‌တာ။‌ကျေးဇူးပါညီမ။
This post has receiveda5.16 % upvote from @boomerang.
မကြိုက်‌ရင်‌ ကျွန်‌‌တော်‌‌ရေးတာဟုတ်‌ဖူး၊ ကြိုက်‌ရင်‌ မ‌ဟော်‌ ‌ရေးတာ တဲ့ 
‌ကျေးဇူးပါညီ။ ဆက်‌ကြိုးစားပါမယ်‌ ဗျ။
ကိုယ်နဲ့ကိုက်တဲ့လိုင်းကို ရွေးထားသင့်ပါပြီ ကိုမဟော်ရေ
ဘယ်‌လိုင်းနဲ့ ကိုက်‌တယ်‌ဆိုတာ ‌ဝေဖန်‌ ပြသ‌ပေးပါ ဦးစိုး။
ကိုဟ့်အသက်အရွယ်နဲ့ အနုအရွတွေ မသင့်တော်ဘူးလို့ ဆိုလာတော့ မဟော်က ၈၀ ကျော်နေပြီလားဟင် မကျော်သေးရင်တော့ အားမငယ်နဲ့လေ အနုအရွတွေ ခံစားတတ်လေ နုပျိုလေပဲတဲ့ ဟားဟား
တားက ၄၀ ‌ကျော်‌‌လေးဘဲရှိတာပါဘုရား။
thettinaung (48) ·3months ago
အနုအရွလေးတွေတော့ဖတ်ချင်မိတယ်ဗျ။ ကျနော်တို့ အသက်အရွယ်နဲ့ စိတ်ကူးယဉ်
လို့ ကောင်းမယ့်ဟာလေးတွေပေါ့ဗျာ။ :D :D
bro အရွယ်‌ ‌ပြော ပြ‌လေ။ ၅၀ မ‌ကျော်‌‌သေးဘူးမဟုတ်‌လား။‌ရေး‌ပေးမလို့ပါ။
၃၅ ပါ ဘရို :D
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့လိုင်းကိုရေးတော့ ရေးရတာပိုလက်သွက်ပြီး ရသလည်းပိုပေးစွမ်းနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
ခက်‌တာက ကိုယ်‌ဘယ်‌လိုင်းကြိုက်‌လဲ မသိ ။မည်းမည်း မြင်‌ရာ ပစ်‌‌နေမိတာ။
ခေါင်းစဉ်နဲ့ကို ကြွေနေပီ ကိုမဟော်
​​သြော်​ ...​ရောက်​ရှိလို့ လာခဲ့ပြန်​ပြီ​လေ....
40 ကျော် အချစ်ပေါ့လေ
ဟိုက်‌ ! ဦးယု‌ရေေ ပြာ‌ပေးဦး။
ကြိုက်ပြီကွယ် ကိုမဟော်ရေးတာမှ ဟုတ်ပါလေစ
ကြိုက်‌တယ်‌လို့ ဆိုလိုချင်‌တာ‌ပေါ့။Beer တိုက်‌မယ်‌။
ကိုမဟော်ရေးရင် ကြိုက်ပြီးသားလို့ဆိုရင် ဘာပြောမလဲဗျာ။လွမ်းအောင် ယုံအောင် အကုန်ပြောတတ်မှတော့ စာရေးတာလည်းကောင်းပြီပေါ့။
‌ပျော်‌‌စေ‌အောင်‌ ‌ရေးလိုက်‌တာပါကိုသန့်‌။လိုအပ်‌တာ‌ထောက်‌ ပြဦး‌နော်‌။‌လေးစားလျက်‌
ရသဆိုလို့ကတော့ မလွတ်စတမ်း စောင့်မျှော်ဖတ်ရှူနေမှာ
ကိုမဟော်... စွဲလမ်းသွားရင်တော့ ကိုမဟော့်အပြစ်ပဲ ဟိဟိ။
သတိ ! ‌ယောကျင်္ား‌လေးများမဖတ်‌ရလို့။
ကဗျတွေ စာတွေ နဲ့ပါလား
လိုင်းေ ပြာင်း‌ရေးကြည့်‌တာ။daily pro တင်‌‌နေ‌တော့ အ‌ကြောင်းစုံမှအဆင်ေ ပြမယ်‌ထင်‌လို့ ၊‌ကျေးဇူးပါညီ ‌။
ကဗျာတစ်လိုင်းကို စာနဲ့ရွှိုင်းထားတာ goodတယ်ဗျ